ဆေးရုံ နှစ်ရုံမှာ Mask အရေအတွက် ၁ သောင်းစီ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
COVID-19 ကာကွယ်ဖို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့ လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီးမှာ Mask များစွာ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့ လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီးတွေမှာ Mask တွေ လှူခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"3 လွှာ Surgical Mask များကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အခုရေ 10000 ￼လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီးသို့ အခုရေ 10000 သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ Fighting Doctors and Nurses !! Please be safe for us !! We need you !! " ဆိုပြီးတော့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီက သူ့ရဲ့ Facebook Page မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း သူက တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို အကျဉ်းချုံးလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့်လည်း အခုဆိုရင် သူ့ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ လုပ်ဖြစ်တော့မယ်လု့ိ ပြောပါတယ်။ မွေးနေ့ပွဲအတွက် စိုင်းစိုင်းရဲ့ အစီအစဉ်ကို အခုလို ပြောပြလာပါသေးတယ်။
"ဒီနှစ်အခြေအနေအရ လူစုဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ အားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲ တတ်နိုင်သလောက်နေဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော့် မွေးနေ့ပွဲကို အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ ကျင်းပဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၅ နှစ်ဆက်တိုက် ကျွန်တော်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရာနေရာကို ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် ဒီနှစ်မှာတော့ လူတိုင်းရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကနေပဲ ကျွန်တော့်ဖျော်ဖြေမှုကို ကြည့်ရှုကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေက နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် ကျွန်တော်ဘယ်လို ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတာ အခုချိန်မပြောနိုင်သေးပါဘူး" ဆိုပြီးတော့ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။